Nyi Mu Yar: ဂျေတီစီ တွင် အိမ်ငှားခြင်း (၁)
at Monday, December 15, 2008 Labels: JTC , MM , Singapore Posted by nyimuyar
ဂျေတီစီ တွင် အိမ်ငှားခြင်း
ဒီတလလုံး အိမ်ရှာခြင်း အိမ်ငှားခြင်း နဲ့ အိမ်ပြောင်းခြင်းတို ့နဲ့ အတော်ပဲ လုပ်ရှုပ်သွားပါတယ်။ စလုံးမှာတော့ တတိယမြောက်အိမ်ပြောင်းခြင်းပါ။ တော်တော်ပဲ အတွေ့အကြုံစုံလင်စွာရသွားပါတယ်။ ဒီတခေါက် ရသွားတဲ့ အိမ်ကတော့ ဂျေတီစီ လို့လူသိများတဲ့ ဂျူရောင်းမြို့နယ်ကောင်စီ Jurong Town Council Corporation (JTC) က အငှားချထားတဲ့ တိုက်ခန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ဆို ဂျေတီစီက ငှားတဲ့အခါ စစခြင်းအလုပ်ရှုပ်သလောက် နောက်ပိုင်းတော်တော်ပဲ အေးချမ်းပါတယ်။ အိမ်ရှင်မှ အချိန်မရွေး အချိန်မတော် အခန်းလာစစ်ခြင်း။ တနှစ်တခါ ပွဲစားခ ပေးရခြင်း ကင်းဝေးရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျေတီစီ ငှားပြန်တော့လည်း အိမ်တခုလုံး ဘာပရိဘောဂမှ မပါတဲ့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပရိဘောဂ တွေ ဝယ်ရပြန်ပါသေးတယ်။
ဂျေတီစီ ငှားကြတော့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက ဂျေတီစီ ငှားရင် ဘာလိုလဲလို ့ခဏခဏ မေးကြလွန်းလို့သူတို ့အတွက် ဘလော့မှာ ရေးမယ် လို ့ကြံရွယ်ရင်း ရေးဖြစ်သွားတာပါ။
ဂျေတီစီကော်ပိုရေးရှင်း ကို ၁၉၆၈ မှာ စပြီးထူထောင်လာတာ ဆိုတော့ ဒီနှစ် ၂၀၀၈ မှာ နှစ်၄၀ ရှိသွားပါပြီ။ သူတို ့က လူနေအိမ်အပြင် စက်ရုံတွေ မြေတွေ အခြားအဆောက်အဦတွေပါ ငှားတယ် ဆိုပေမယ့် စာရေးသူတို့အဖို့စိတ်အဝင်စားဆုံးက အသင့်နေနိုင်တဲ့ လူနေအိမ်ခန်းတွေပါပဲ။ ဂျေတီစီ အကြောင်း အပြည့်အစုံကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ဂျေတီစီ နဲ့အနီးဆုံး အမ်အာတီ ကတော့ ဂျူရောင်းအိစ် Jurong East ဘူတာပဲ ဖြစ်ပြီး ဘူတာစင်္ကြံပေါ်ကနေ လှမ်းမြင်နိုင်ပါတယ်။ လိပ်စာအပြည့်အစုံက .
(photo from JTC )
For further enquiries, please contact us at
ဂျေတီစီ ကနေ အိမ်ငှားခြင်းကို သူတို့ရုံးအခေါ် Scheme for Housing of Foreign Talent (SHiFT) for employment pass holdersလို ့ခေါ်ပြီး မြန်မာမှုပြုမယ်ဆို တော်တော်ရှည်မှာမို့ဒီအတိုင်းပဲထားလိုက်ပါတော့မယ်။
အခန်းငှားရမ်းရန်အတွက် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ
၁) အဓိက ငှားရမ်းမည့်သူသည် အသက် ၂၁ နှစ်ပြည်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ ဒေဝါလီခံထားသူ မဖြစ်စေရ၊ ကိုယ်ပိုင်အိမ် မပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ရပါမယ်။
၂) အဓိက ငှားရမ်းမည့်သူသည် အီးပီ (သို ့) ပီအာ ဖြစ်ရမည် ့အပြင် အခြေခံလစာ အနည်းဆုံး ၂၅၀၀ ရရှိရပါမယ်။
(ဒီနေရာမှာ အီးပီ ဆိုရင် လစာထုတ် ဖြတ်ပိုင်း ပြစရာမလိုဘဲ ပီအာဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး ၃ လ လစာထုတ်ဖြတ်ပိုင်း ပြစရာလိုပါတယ်။
အီးပီ ဆိုရင် လစာ ၂၅၀၀ ရမှ ထုတ်ပေးတာ ဆိုပြီး တောင်းမကြည့်တာပါ)
၃) အဓိက ငှားရမ်းမည် ့သူသည် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငနး် (သို့) ကုမ်ပဏီ တွင် လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်ရပါမယ်။
(ကုမ်ပဏီမှ ထောက်ခံစာပူးတွဲ တင်ပြရပါမယ်။)
၄) အဓိက ငှားရမ်းမည်သူသည် အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်ပြီး (အိမ်ထောင်ဖက် နှင့် ကလေးများ) စင်ကာပူတွင်ရှိနေလျှင် မိသားစုအဖြစ် အတူတကွ ပူးတွဲတင်ပြရပါမယ်။
၅) အိမ်ခန်းကို တဦးတည်း(သို ့) လူလွတ်များငှားရမ်းပါက အခန်း ၃ ခန်း (အိပ်ခန်း၂ခန်း+ဧည့်ခန်း) ပါသောတိုက်ခန်းသာ ငှားရမ်းခွင့်ရှိပါတယ်။
ပူးတွဲ ငှားရမ်းမည့်သူသည် မိသားစုဝင်ဖြစ်ရန်မလိုပါ (သူငယ်ချင်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လညး်ရပါတယ်။)
မိသားစုဝင် ဆိုသည်မှာ အဓိက ငှားရမ်းမည်သူ၏ အိမ်ထောင်ဖက် ကလေး မိဘ နှင့် မွေးခြင်း များဖြစ်ရပါမယ်။
ဂျေတီစီ မှ လျှောက်လွှာကို အချိန်မရွေးငြင်းပယ်နိုင်ပြီး တိုက်ရိုက်လျှောက်ဖို ့ကိုပဲ သူတို ့က အားပေးပါတယ်။
လျှောက်လွှာ (ဖောင်) ဒေါင်းလုဒ် ရယူရန်
၁. အဓိကငှားရမ်းမည့်သူ နှင့် ပူးတွဲ ငှားရမ်းမည် ့သူများ အားလုံးသည် အခန်းငှားစဉ်တွင် ကိုယ်တိုင်လာရောက်ကြရမှာပါ။
၂. အဓိက နှင့် ပူးတွဲ ငှားရမ်းမည့်သူများသည် လျှောက်လွှာကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်ကြလျှက် အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများကို မူရင်းနှင့်တကွ မိတ်တူပါ ယူဆောင်လာကြရပါမယ််
က) သက်တမ်းရှိ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်
ခ) အမ်အိုအမ် ၊ အိုင်စီအေမှ ထုတ်ပေးထားသော သက်တမ်းရှိ အလုပ်လုပ်ခွင့၊်နေထိုင်ခွင့် လက်မှတ်(အီးပီ-ပီအာ)
ဂ) အဓိက ငှားရမ်းသူနှင့် အတူနေထိုင် မည် မိသားစုဝင် များ ပတ်သက်မှု စာရွက်စာတမ်းများ
ဃ) ကုမ်ပဏီမှ ထောက်ခံစာ (အဓိက နှင့် ပူးတွဲပါ ငှားရမ်းသူများအားလုံး အလုပ်လုပ်သော ကုမ်ပဏီတိုင်းမှ ထောက်ခံစာ)အလုပ်လုပ်ကြောင်း ထောက်ခံစာထုတ်ပေးသောရက်စွဲသည် လျှောက်လွှာတင်မည်ရက်နှင့် ရက်၃၀ အတွင်းဖြစ်ရမည်။ ထောက်ခံစာတွင်
(၁) အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ၏ အမည်
(၃) အိုင်စီ နံပါတ်(အီးပီ နံပါတ်)
(၄) အခြေခံ လစာနှင့်
(၅) ကုမ်ပဏီသို့ စတင်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်သော ရက်စွဲ တို ့ပါဝင်ရမှာပါ။
င) လတ်တလောရိုက်ထားသော ပါ့စပို ့အရွယ် ဓာတ်ပုံ ၂ပုံ
အဓိက ငှားရမ်းမည် သူ၏ မိသားစုဝင်ထဲတွင် ကျောင်းသား(စတူးဒင့်ပါစ့် ကိုင်ဆောင်ထားသူ)ပါလျှင် ကျောင်း(တက်ကသိုလ်)မှ ထောက်ခံစာပါရမည်။ အဆိုပါ ထောက်ခံစာတွင် ကျောင်းသားအမည်။ ဘာသာရပ် နှင့် တက်ရောက်နေသော နှစ် အပိုင်းအခြားတို ့ပါဝင်ရပါမယ်။
၃. အဓိက ငှားရမ်းမည့် သူသည် GIRO ဂျိုင်ရို (အွန်လိုင်း ငွေပေးချေမှု) ပြုလုပ်ရန် ဘဏ်စာအုပ် ယူဆောင်လာရပါမယ်။ ဘဏ်စာအုပ်မရှိပါက ဘဏ်အကောင့် နံပါတ်ကို ပြသရပါမယ်။
၄. လျှောက်လွှာတင်ရာတွင် အောက်ပါဝန်ဆောင်ခများ ပေးဆောင်ရပါမယ်။
က) ပထမ တလစာ(လ တစ်ဝက်မှ စငှားလျှင် တလခွဲစာ) နှင့် လစဉ်ပေးရမှာပါ (ဝန်ဆောင်ခ နှင့် ထိမ်းသိမ်းခ) Service & Conservancy Charges
ခ) စဘော်အဖြစ် တင်ထားရမည့် (တလစာ) အိမ်ခန်းငှားခ နှင့် လစဉ်ပေးရမည့် (ဝန်ဆောင်ခ နှင့် ထိမ်းသိမ်းခ)
ဂ) တံဆိပ်ခေါင်းခွန် နှင့်
ဃ) ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်ခ
အတွေ ့အကြုံအရ ပြောရရင်တော့(အနီးစပ်ဆုံးဈေးတွေပါ)
(ဝန်ဆောင်ခ နှင့် ထိမ်းသိမ်းခ) တလကို ၅၀ ကနေ ၆၅ ဒေါ်လာလောက် ပေးရမှာဖြစ်ပြီး အထူးသတိပြုဖို ့က လစဉ်ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ကတော့ တကြိမ်ထည်း ပေးရမှာဖြစ်ပြီး ၁၇၀ ဒေါ်လာလောက် ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်ခ ကလည်း တကြိမ်တည်း ပေးရမှာဖြစ်ပြီး ၉၀ ဒေါ်လာလောက် ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ အချက်အလက်များ မပြည့်စုံပါက လျှောက်လွှာကို လက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ဖုန်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း အခြား တစ်နည်းနည်းဖြင့် ကြိုတင်ရယူခြင်းများ ခွင့်မပြုကြောင်း နောက်ဆုံး မှာ ဖော်ပြထားပါ သေးတယ်။
အထက်က အချက်များကတော့ ဂျေတီစီကနေ ဖော်ပြထားတဲ့ သတ်မှတ်ချက်လေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အတွေ ့အကြုံ နဲ့ မှတ်သား မိသလောက် ဘာသာပြန်ပေးထားတာပါ။
အပိုင်း(၂) ကို ဆက်ပြီးအချိန်ရတာ နဲ့ ရေးသွားပါ့မယ်။